Etu ị ga -esi nweta isi okwu na Shein ngwa ngwa | Nzukọ mkpanaka
Shein bụ otu n'ime ụlọ ahịa ịntanetị kachasị ewu ewu nke oge a, ebe anyị nwere ike ịchọta uwe kacha atọ ụtọ. Otu n'ime igodo Shein bụ sistemụ ntụpọ ya, nke na -enye anyị ohere ịnweta mwepụ ego. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na sistemụ a bụ ihe na -enye aka na ọtụtụ ndị chọrọ inwe akaụntụ na ụlọ ahịa a ma na -achọ irite isi ihe, ihe ga -ekwe omume n'ụzọ dị iche iche.
Mgbe ah anyị na -agwa gị ihe niile gbasara sistemụ isi ihe a na Shein. N'ụzọ dị otu a, ị ga -enwe ike ịma ụzọ enwere ike isi nweta isi ihe n'ụzọ dị mfe n'ime ụlọ ahịa akwa a. Isi ihe ụfọdụ ị ga -enwe ike iji mee ihe mgbe ịzụrụ ihe ndị ọzọ wee si otú a nweta ego na ịzụrụ ihe ndị ahụ.
1 Kedu ihe bụ isi na Shein na gịnị ka ha bụ
2 Etu ị ga -esi nweta isi ihe na Shein
2.1 Nyochaa akaụntụ gị
2.2 Ịzụ ahịa
2.3 Comments na ngwaahịa
2.4 Mepee ngwa kwa ụbọchị
2.5 Ntuli aka ntuli aka na ihe omume
3 Isi ihe ndị a agwụla?
Kedu ihe bụ isi na Shein na gịnị ka ha bụ
Shein nwere mmemme isi ihe na ụlọ ahịa ya, nke emebere ka ndị ọrụ wee nwee nwere ike nweta ego na ịzụrụ ha n'ime ya. Enwere ike nweta isi ihe ndị a n'ụzọ dị iche iche, yabụ a ga -achịkọta ya na akaụntụ onye ọrụ, onye ga -ekpebi ma ọ bụrụ na ha chọrọ iji ha mgbe ịzụrụ ihe, ka ọnụ ahịa a ga -akwụ dị ntakịrị ekele maka iji isi ihe ndị a.
Ụlọ ahịa ahụ na -enye ọtụtụ ụzọ isi nweta isi ihe, yabụ ndị nwere mmasị ga -achọta mgbe niile ụzọ ha ga -esi nweta isi ihe ha ga -eji zụọ ihe. Agbanyeghị na ọ dị mkpa iburu n'uche na agbadoro usoro oke na nke a, n'ogo kachasị nke enwere ike nweta ma ọ bụ nweta kwa ụbọchị. Ndị a bụ kachasị:
Oke kachasị 8.000 kwa ụbọchị n'ozuzu.
Oke ihe ruru 2.000 kwa ụbọchị maka ịza ajụjụ.
Oke ihe 500 kwa ụbọchị maka ihe omume.
Oke ihe 200 kwa ụbọchị maka nyocha.
Ọ bụ ya mere anyị ji kwesị ịkpachara anya Mgbe anyị na -achọ irite isi na Shein, na anyị agaghị agafe oke nke ụlọ ahịa guzobere na nke a. Agbanyeghị na ọ na -esiri ike iru oke ndị a, n'ihi na ọ pụtara na anyị ga -emerịrị ọtụtụ omume n'otu ụbọchị yana kwa, ọ naghị enwekarị ike ịme ọtụtụ nyocha ma ọ bụ kwuo n'otu ụbọchị, dịka ọmụmaatụ.
Etu ị ga -esi nweta isi ihe na Shein
Nke a bụ ihe ọtụtụ ndị ọrụ nwere mmasị na ya, otu a ga -esi kwe omume. Ọ dabara nke ọma, Enwere ọtụtụ ụzọ iji nweta isi ihe na Shein, yabụ ị ga -ahụrịrị nhọrọ ga -amasị gị. Storelọ ahịa na ngwa dị na ekwentị na -enye gị ohere irite isi na -enweghị nnukwu mbọ. Ị gaghị eme ihe ọ bụla dị egwu iji nweta isi na akaụntụ gị, nke ị ga -eji emechaa na ịzụrụ ihe. Anyị na -agwa gị ụzọ ndị dịnụ iji nweta isi ihe n'ụzọ dị mfe.
Nyochaa akaụntụ gị
Nzọụkwụ mbụ anyị ga -eme mgbe anyị malitere iji ụlọ ahịa a bụ iji nyochaa akaụntụ anyị. Omume a nwere ụgwọ ọrụ, n'ihi na eziokwu nke ịlele email na akaụntụ anyị enyela anyị isi 100 na Shein. Mgbe ị mepere akaụntụ n'ụlọ ahịa, ị ga -enweta ozi -e na -arịọ gị ka inyocha adreesị email. Naanị ị ga -eme usoro egosipụtara (na -ejikarị pịa njikọ) nke a ga -enyocha akaụntụ gị.
Ihe ọ bụla ịzụrụ na Shein ga -ewetara gị isi ihe. Ihe nkịtị bụ na ụlọ ahịa ga -enye anyị otu isi maka euro ma ọ bụ dollar ọ bụla anyị mefuru n'usoro ọ bụla. Ọ bụ ya mere ọ bụrụ na anyị etinyela nnukwu olu n'usoro na ụlọ ahịa, nke nwere ike iru narị narị euro, anyị na -enweta ezigbo isi ihe na akaụntụ anyị na ngwa ahụ. A na -agbakwụnye isi ihe ndị a na akaụntụ ahụ mgbe nnata nke iwu ahụ kwadoro.
Comments na ngwaahịa
Ọ bụrụ na ị nyela iwu, ụlọ ahịa ahụ na -enye gị ohere nke ikwu okwu ma ọ bụ nyocha gbasara ngwaahịa ndị ahụ i mere. Nke a bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè anyị nwere ike iji nweta isi okwu na Shein, ebe ụlọ ahịa na -etinye ihe dị mkpa na nkwupụta ndị ọrụ ma na -achọ ịkpalite nkwupụta ma ọ bụ nyocha gbasara ngwaahịa. A ga -ahapụ gị ka ịza ajụjụ na ngwaahịa niile ị nwetara ma ọ bụ zụta na akaụntụ gị.
Na mgbakwunye, ọ na -achọ ịkpali ndị nkọwa ma ọ bụ ọkwa ndị ahụ ka akọwara nke ọma. Ya mere, enwere usoro isi okwu maka ịza ajụjụ n'ụlọ ahịa ahụ. Nke a bụ ihe ị nwere ike imeri n'okwu a:
Isi 5 maka ikenye okwu.
Isi ihe 10 maka ikenye nkwupụta yana gụnyere onyonyo (opekata mpe otu).
Isi ihe 2 ma ọ bụrụ na itinye nkọwa nke nwere oke nha.
Dị ka ị na -ahụ, ọ na -atọ ụtọ ibipụta ya nyocha ngwaahịa ndị ị zụtara na Sheinn'ihi na ọ bụ ụzọ dị mfe iji nweta isi ihe na akaụntụ gị. Iji nwee ike ịza ajụjụ, ị ga -eche ruo mgbe inwetara ikike wee banye na ngwa ahụ, tinye profaịlụ gị wee gaa na ngalaba ezigara. N'ebe ahụ ị nwere ike nweta iwu gị niile, ị ga -enwe ike ịza ajụjụ maka ngwaahịa ịchọrọ.
Ụlọ ahịa ahụ na -enye gị ohere kwuo okwu maka ngwaahịa ọ bụla nke usoro ahụ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ịzụtara ngwaahịa ise dị iche iche, ị nwere ike ịhapụ nkwupụta ise ma ọ bụ ọkwa dị iche iche ise. Dabere n'ụdị okwu ị hapụrụ, ị ga -enwe ike irite ihe ruru 50 n'okwu a, yabụ na ọ bụ nhọrọ na -atọ ụtọ maka ọtụtụ ndị ọrụ Shein. Ị gaghị enwe ike ịza ajụjụ ma ọ bụrụ na ịzụrụ ngwaahịa n'ime ụlọ ahịa.
Mepee ngwa kwa ụbọchị
Nhọrọ nke Shein na -achọ idobe ndị ọrụ na ngwa kwa ụbọchị. Ịnweta akaụntụ gị na ngwa kwa ụbọchị ga -enye gị ohere ịnweta isi ihe. Nke a bụ nbanye kwa ụbọchị, nke pụtara na anyị ga -enwerịrị ngwa kwa ụbọchị maka ụbọchị 7, ka ụbọchị ọ bụla nwee ike nweta ọtụtụ isi na akaụntụ anyị. Anyị ga -enwerịrị ịnweta akaụntụ ahụ, a sịghị ya mee ihe ọ bụla ọzọ na nke a.
N'ime okirikiri ụbọchị asaa a, anyị ga-enwe ike irite isi ihe kwa ụbọchị anyị banyere. N'ezie, n'ime otu izu anyị nwere ike nweta ngụkọta nke isi 37 na ngwa ahụ, na -ejighị ego. Naanị site na imepe ngwa na ịnweta akaụntụ anyị, anyị enwetala isi ihe ndị ahụ.
Ntuli aka ntuli aka na ihe omume
Na ngwa dị na gam akporo na iOS nke Shein anyị anyị chọtara ngalaba nyocha. Nkebi a bụ ụzọ ọzọ ị ga -esi nweta isi ihe ọsọ ọsọ na ngwa ngwa, nke anyị ga -eji emechaa na ịzụrụ ihe anyị. Ngwa a na -enwekarị nyocha zuru oke, nke anyị ga -enwe ike ịza mgbe ahụ, ka anyị wee nweta isi ihe maka akaụntụ ahụ. Ihe a na -emekarị bụ na nyocha ndị a dị ngwa ngwa na naanị n'ime nkeji ise anyị dechara ha, n'agbanyeghị na ha na -egosikarị ogologo oge ọ ga -ewe ịmalite.
Ọnụ ego anyị nwere ike irite na nyocha ndị a na Shein na -agbanwe agbanwe. Enwere nyocha ebe anyị nwere ike irite isi 20 na ndị ọzọ na -enye anyị naanị 1 ma ọ bụ 2, yabụ enwere oge mgbe ọ nwere ike ịdị ka ọ baghị uru ịmecha nyocha a. Ọ bụrụ na anyị na -achọ inweta isi ihe ụfọdụ ma anyị dị mkpụmkpụ, imecha nyocha ole na ole ka ewepụtara dị ka ụzọ dị mfe iji nweta ya. Naanị ndị ọrụ nọ na ngwa dị na gam akporo na iOS ga -enwe ike ime ya, esiteghị na weebụ nweta ya.
Ụlọ ahịa ahụ na -ahazikwa mmemme dị iche iche, nke nwere taabụ na ngwa ahụ. Anyị nwere ike ịhụ ihe omume dị ebe ahụ ma anyị nwere ike nweta isi ihe naanị site na isonye na ha, dịka ọmụmaatụ. Ọ bụ ụzọ ọzọ dị mfe iji kpata ha.
Isi ihe ndị a agwụla?
Otu n'ime obi abụọ nke ọtụtụ ndị ọrụ na Shein bụ ma ọ bụrụ na isi ihe ha nwetara agaala. Azịza ya bụ ee na nke a bụ ihe anyị ga -elebara anya nke ọma, n'ihi na anyị enweghị ike idobe isi ihe ndị ahụ na akaụntụ ruo mgbe ebighị ebi. Ọzọkwa, oge ọ ga -ewe iji kubie ume bụ ihe na -agbanwe nke ukwuu, dabere n'otú anyị si nweta isi ihe ndị ahụ na mbụ.
Nke a na -eche na isi ihe ndị anyị nwetara site na nkọwa nwee ụbọchị ngafe dị iche ndị anyị nwetara na nyocha in-app na gam akporo ma ọ bụ iOS. Na ngalaba ihe dị n'ime ngwa a, anyị nwere akụkọ ebe anyị nwere ike ịhụ isi ihe niile anyị nwetara, ebe egosipụtara ụzọ anyị siri nweta isi ihe ndị ahụ yana kwa ngwụcha ha. Yabụ na anyị maara mgbe anyị ga -eji ha na ịzụrụ ihe anyị mere atụmatụ ime.
Enwere isi ihe ụfọdụ na -agwụ mgbe otu izu gacharaebe ndị ọzọ nwere ike ịdịru ọnwa atọ. Ya mere, ọ dị nnukwu mkpa na anyị ga -eburu ụbọchị mmebi a n'uche, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị na -eche iru isi ihe ụfọdụ tupu anyị etinye iwu na Shein, n'ihi na ọ nwere ike ime na mgbe oge ruru ka itinye iwu ahụ ga -adị. bụrụ usoro usoro nke anyị furu efu, n'ihi na ha agwụla. Idebe isi okwu gị mgbe niile bụ ụzọ dị mma iji jide n'aka na ị gaghị efu ma ọ bụ chefuo iji ụfọdụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Mmemme » Otu esi enweta isi okwu na Shein ngwa ngwa